Google yatoburitsa Yekutanga vhezheni yeApple 11 uye idzi nhau dzayo | Kubva kuLinux
Google yakatoburitsa Yekutanga vhezheni yeApple 11 uye idzi ndidzo nhau dzayo
Google yaunzwa musi weChipiri yekutanga Android 11 Shanduro Yekutarisa Yekuvandudza, inotevera hukuru hukuru kune yako nharembozha. Kunyangwe Google isina kusanganisa akawanda masikirini mumashure ayo kutsigira kuziviswa kweshanduko nyowani, kambani yakaita zvipikirwa zvakakura, senge zvirinani zvakavanzika maficha uye matsva maficha mameseji, matsva maitiro ane chekuita ne5G kana kuzvitonga, pamwe nekumwe kuvandudzwa senge yekuzvarwa screen kurekodha, pakati pevamwe.
Uku kuongorora kweiyo Android 11 yevagadziri vanouya zvishoma kumberi pane zvakajairwa uye ikozvino yave kuwanikwa yePixel 2, 3, 3a uye 4 zvikwata, pamwe nemifananidzo yakajairika yesystem. Iro zita rekuti Android 11 mhedzisiro yezita idzva remazita rakagamuchirwa mushure mekutanga kweiyo yapfuura vhezheni yaro mbozhanhare inoshanda sisitimu.
Izvi ndizvo zvimwe zvezvinhu zvitsva uye zvigadziriso iyo yakanyorwa neGoogle mune yavo blog positi:
Zvirinani "yega" mvumo sarudzo yemashandisirwo: Ichi ndicho chimwe chezvinhu zvakaratidzwa neGoogle mukuzivisa kweiyo Android 11 Preview Developer sezvo ichizopa "mvumo imwechete" yezvishandiso zvinoda kuwana dhata renzvimbo yadzo, maikorofoni uye zvishandiso zvemakamera. Iko kuwedzera kuri nyore, asi kunoita kuti Android ive yakachengeteka zvakanyanya.
Android Q inodaidzwa kunzi Android 10 uye Google yakazivisa kuti inosiya mazita emakodhi
Iyo "Bubbles" API, ichi chitsva mushandisi chinongedzo chekutumira mameseji chinobvumira kukurukurirana kwakawanda kuve nyore kusvika chero kupi, kuchidzikisira padenderedzwa risingatenderedzeki pachiso cheiye wekubatana. Pamusoro pekushandisa mameseji eGoogle, mamwe maficha senge WhatsApp, Facebook Messenger kana Signal anogona kuenderana.
Chimwe chinhu chitsva chinomira mukutarisa kweiyo Android 11 ndechekuti Google yakachinja iyo yekuzivisa pane iyo Android zvakare Uye gore rino Google inoti mapaneru acho achasanganisira "chikamu chakatsaurirwa kutaurirana mumumvuri wekuzivisa."
Google yaunza chikamu chitsva che "nhaurirano" munzvimbo yekuzivisa iyo inoparadzira meseji nyowani munzvimbo yayo isati yatumirwa maemail, Instagram zvido uye maapplication ekuvandudza. Pfungwa iyi ndeyekuita kuti zvikamu zvekutaurirana zvefoni yako zviwanikwe uye bvumire vashandisi "ipapo kuwana kwako kutaurirana ikozvino nevanhu mune zvavanoda zvekushandisa."
Screen kurekodha: iri basa rinokutendera kuti utore chinyorwa uye ndechekuti kunyangwe google yaive yatove neshanduro mu beta ye Android 10 iyo isina kusvika kune yekupedzisira vhezheni.
Iyo "Kushanda Kunoenderana" peji: Google inoita kuti hupenyu huve nyore kune vanogadzira maapps eApple 11 sezvo Google yagadzira peji re "App Compatibility" riine mashandiro ekuchinja kweapp yega yega
Pfungwa yacho ndeyekuti panzvimbo pekutsanangura SDK nyowani tarisa uye dzorera chikumbiro chako kuti uzviedze, ingovhura peji inoenderana yekushandisa, tanga kubaya mabhatani uye uone izvo zvisiri kushanda?. Google zvakare inoti yakaedza "kudzora maitiro ekuchinja anogona kukanganisa mashandisiro" uye yakaita shanduko yekugashira pese pazvinogoneka.
Chiitiko chiri nani che5G: Google inoda kubvumidza vashandisi vazhinji kutenderera pasirese kuve neruzivo rwe 5G. Mu Android 11, kambani yakagadziridza uye ikagadzirisa iyo yekubatanidza APIs saka iwe unogona kutora mukana wekuvandudzwa kwekumhanya kwe5G. Iyi API inobvumira vanogadzira kuti vatarise kana kubatana kwacho kusingagumi uye kana zvirizvo, ipa resolution yepamusoro kana mhando inogona kushandisa yakawanda data.
Android modularization inoenderera ne Android 11: pa Android 10, iyo «Mainline Project», yafambisa akawanda masisitimu ezvinhu kuAPK kukwidziridzwa kune fomati nyowani, ine simba refaira inonzi "APEX".
APEX iri tsika faira fomati yakagadzirirwa kuti isvike pakutanga kwebhoti maitiro uye kuve nemvumo yakawanda kupfuura APK, ichiita kuti ive yakanaka yekutambira nekugadzirisa yakaderera-chikamu chikamu system.
Pakupedzisira vanozivisa zvimwe zvakawanda zvidiki kugadzirisa uye shanduko, senge iyo otomatiki switch kune yakasviba modhi uye kugona kupinha maapplication kumusoro kwechiito pepa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Noticias » Google yakatoburitsa Yekutanga vhezheni yeApple 11 uye idzi ndidzo nhau dzayo
Bedrock Linux: Inoshamisa Linux metadistribution kubva pane yakajairwa
MX Linux: Dzazvino nhau dzemwedzi waKukadzi 2020